Business Pcs နဲ့ Consumer Pcs ခြားနားချက်များ : Access Spectrum
Connect . Collaborate
Protect . Optimise . Infrastructure
ယခုခေတ်မှာ ကွန်ပျူတာ တွေဟာ နေ့စဉ်ဘဝမှာ လိုအပ်တဲ့အသုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်လို့လာပါတယ်။ လူအများစုဟာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ဝယ်ယူပြီးနောက်အသုံးပြုတဲ့ သက်တမ်း ဟာ ၃နှစ် နှင့်အထက်ရှိတယ်လို့ စစ်တမ်းတွေက ဖော်ပြကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကွန်ပျူတာတွေဝယ်ယူကြတဲ့အခါ မိမိရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာကို မှန်ကန်စွာရွေးခြယ်နိုင်ဖို့ရာ အလွန်ပင်အရေးကြီးပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားများစွာရှိတဲ့အထဲကမှ လူတချို့ သတိမထားမိတဲ့ အချက်ကတော့ ကွန်ပျူတာတွေဝယ်ယူတဲ့အခါ ဈေးနှုန်း brand နဲ့ specifications ကိုသာမကပဲ Business နဲ့ Consumer လို့ခေါ်တဲ့ Class အမျိုးအစားကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
Business နဲ့ Consumer ကွန်ပျူတာတွေက ဘာတွေအဓိကကွာသလဲ?
Consumer အမျိုးအစား ပစ္စည်းတွေကို retail ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပေမယ့် Business အမျိုးအစားပစ္စည်းတွေဟာ အချို့သော သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေမှာသာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် Consumer Class အမျိုးအစားဟာ ပိုမိုသက်သာ လေ့ရှိပါတယ်။ Consumer အမျိုးအစားတွေဟာ များသောအားဖြင့် warranty ၁နှစ်တာ ရရှိပါတယ်။ Business အမျိုးအစား တွေရဲ့အားသာချက်ကတော့ warranty ပိုမိုကြာမြင့်စွာရရှိခြင်း ခိုင်ခံ့တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ ကြာရှည်ခံတဲ့ hardware စတဲ့ အားသာချက်တွေရှိပါတယ်။ ကြာရှည်သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် စစချင်းဈေးနှုန်းအရကြည့်ရင် ဈေးကြီးတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် warranty time နဲ့ ကြာရှည်ခံမှုတွေကြောင့် Consumer Class ထက်စာရင် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ Business Class ကိုသုံးစွဲမှုများပြားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Business model computer တွေဟာ professionals တွေ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် webcam တွေပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ် Solid State Drive တွေပါလာမယ်။ လက်ဗွေစနစ်, Facial Recognition, TPM chipset နဲ့ အခြားသော security feature တွေ ပါလာပါတယ်။ ပြင်ပ device များစွာနဲ့ ချိတ်ဆက်သုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက် port တွေလည်း ပိုမိုပါဝင်လာပါတယ်။
အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ Consumer Model တွေဟာ warranty တစ်နှစ် ဖြင့်သာရရှိနိုင်ပြီး Business Model တွေမှာ warranty သုံးနှစ်မှစတင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Business Model တွေမှာ on-site service support ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး warranty ကုန်သွားတဲ့အခါမှာလည်း warranty extension process ကို ဝယ်ယူလို့ရပါသေးတယ်။
Business Model တွေဟာ ကြာရှည်ခံအောင် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ပလတ်စတစ် နဲ့ အခြားသော ဖိုင်ဘာ စတဲ့ ပစ္စည်းများကိုအသုံးမပြုပဲ metal နှင့်သာ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ keyboard တွေ switch တွေ အမြင့်တစ်ခုကနေ ပြုတ်ကျတဲ့အခါမှာ မထိခိုက်နိုင်အောင် semi-rugged design လို့ခေါ်တဲ့ အကြမ်းခံတဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး shock resistance feature တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။
ဈေးကွက်အတွင်းမှာ Consumer Model များကို အရောင်အမျိုးမျိုး ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နိုင်ပေမယ့် Business Model တွေမှာ များသောအားဖြင့် အမည်းရောင် ငွေရောင် စတဲ့ အမြင်ရှင်းပြီး မည်သည့်နေရာမှာမဆို လိုက်ရောညီထွေဖြစ်မယ့် အရောင်များနဲ့သာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အထက်မှာပြောပြခဲ့တာကတော့ Business နဲ့ Consumer ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားတွေရဲ့ ကွာခြားချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Access Spectrum သည် ယခုလက်ရှိ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထိပ်တန်း အဖွဲ့အစည်းများ ကိုဝန်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပြီး Dell, Lenovo, HP အစရှိတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်များစွာရဲ့ Official Partnership ကိုလည်းရရှိထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Access Spectrum မှာ ကွန်ပျူတာနှင့် စပ်ဆက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် အတွက် အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Access Spectrum Company Limited
Phone – 01380900,01386567
Email – info@accessspectrum.net
Address – 364/366 မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့
This entry was posted in DELL, Products and tagged Computers, Dell, Dellcomputers, DellPartner.
Protect . Optimise .